8.4 Qoraalka Multi-line - Geofumed
8.4 Line Multiple Text
Juunyo, 2012 Koorsada AutoCAD 2013, Koorsooyin Bilaash ah
Marar badan, sawiradu waxay u baahan yihiin wax aan ka badnayn hal ama labo erey oo sharraxaad ah. Xaaladaha qaarkood, si kastaba ha ahaatee, qoraalada lagama maarmaanka ah waxay noqon karaan labo ama ka badan cutubyo. Kadibna, isticmaalka qoraalka xariiqda gabi ahaanba waa shaqeyn. Halkii, waxaan isticmaalnaa qoraallo dhowr ah. Doorashadan waxaa lagu hawlgeliyaa badhanka u dhigma ee laga heli karo "Qaybta" qoraalka "Faahfaahinta", iyo sidoo kale kooxda "Buuga" ee "Tababar". Waxay leedahay, dabcan, amar xiriir la leh, waa "Textom". Marka firfircooni, amarku wuxuu na weydiistaa inaan soo qaadno shaashadda daaqada soo saari doonta qoraalka khadadka badan, taas oo abuuraysa, si ay u hadasho, booska processor-yada yar. Fikradda la xoojiyey haddii aan ku dhaqaajinno aaladaha u adeega qaabeynta qoraalka, taas oo, marka loo eego, waxay u dhigantaa shaqooyinka leh xayndaab xayndaab ah oo ku yaala farta.
Isticmaal "Multiline Editor" waa mid aad u fudud oo la mid ah tafatirka ee processor eray kasta, kuwaas oo aadka loo yaqaan, sidaas darteed waa ilaa akhristaha in ay ku dhaqmaan oo leh qalabka. Ha iloobin in "Muuqaalka Qaabka" ee "barbaro" uu leeyahay liiska maqaarka oo leh fursado dheeraad ah. Sidoo kale waa in ay sheegayaan in si edit wax qoraal ah khadadka kala duwan u isticmaalaan amarka isku mid ah qoraalka ah ee a line (DDEDIT), sidoo kale double-riixi kartaa shayga qoraalka, farqiga u yahay in kiiskan editor furo in aan halkaan ku soo bandhigno, iyo sidoo kale tabaha saxda ah "Editor Editor" ee xadhigga. Ugu dambeyntii, haddii aad qoraalka multiline shay ka kooban yahay dhowr ah cutubyada, waa inaad dhigay oo xuduudaheedu ay (sida indents, kala dheereynta line iyo xaq), iyada oo loo marayo sanduuqa wada hadal ah oo magac la mid ah.
Post Previous«Previous 8.3 Hababka qoraalka ah
Post Next Qaababka 8.5Next »